Lunacy waa tifaftire muuqaal kale oo leh .sketch | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | dhowr, Kaararka kartoonka
Lunacy wuxuu nooga yimaadaa Windows 10 dukaankiisa rasmiga ah markaa waad ku shaqeyn kartaa dhammaan noocyada feylasha sida kuwa .sketch. Astaamaheeda ugu wanaagsan waxaa ka mid ah awooddeeda ay kula shaqeyn karto vector-ka, sawirrada wejiyadooda iyo dhammaan noocyada sawirrada.
App aad ka heysato Windows 10 dukaanka ama laftiisa waxaad kala soo bixi kartaa sida loo fulin karo inaad kahesho offline markasta. Qalab leh dhammaan shaqooyinkaas oo dhan wuxuu doonayay inuu ka dhigo aalad kuwa kale.
Inaad shaqeyn karto mooyee oo leh faylal .sheeg ah, taas oo aynu jidka ku sii hayno maalmo ka hor ayaa warkan ka helay UXpin, wuxuu na siiyaa xarumo badan oo aan wax uga qabanno feylasha sawirka, abaabulno bogag, ku biirno oo aan isku toosino walxaha ama aan u adeegsanno qalabka qaab qorista laftooda.
Isleegkuna ma maqna kartida dhoofinta faylasha ee PNG iyo SVG, ama xitaa barnaamijyada leh CSS iyo XAML code si aad uga faa'iideysato. Waxaanan ka hadlaynaa xalka loogu talagalay tafatirka oo xitaa boggeeda internetka uu kuu oggolaanayo inaad "codsato" astaamaha cusub ee lagu dul shaqeynayo.
Lunacy waxaa abuuray shirkadda gadaasha astaamaha iyo sawirada astaamaha8 waxayna na siineysaa awood aan ku rakibno Windows 10 si ay kaliya u weydiisato 15MB oo boos ah. Taxaneyaal kale oo wanaag ah ayaa akhrinaya faylasha jabay ee PSD, iyaga oo ku keydin doona .sketch iyo xitaa soo saarista shaqada la qabtay si loogu qaado CDN.
Una qalab aad u badan taasi ma iloobi karto faahfaahintaas ay dalbadeen naqshadeeyayaasha oo ay laftigeeda dhigeyso meel ka muhiimsan meesha muhiimka ah si loo raaco wadada. Wax walba maahan Adobe, sidaa darteed waa inaan marwalba u digtoonaano taxanahan xalalka ah ee shaqooyinka qaarkood naga caawin karaan inaanan dhex marin sanduuqa oo aan ku xadidno inaan u isticmaalno si bilaash ah.
Helitaanka Lunacy 4.0 laga soo xigtay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka kartoonka » Lunacy waa tifaftire sawir-arag ah oo la shaqeeya faylasha .sketch